Aoka Ianao ho Naman’Andriamanitra Mandrakizay!
Mila miezaka ianao vao mahazo namana, nefa mila miezaka koa mba ho mpinamana foana ianareo. Hahazo fitahiana be dia be ianao, raha miezaka ho naman’Andriamanitra foana. Hoy i Jesosy tamin’ireo nino azy: “Ny marina hanafaka anareo.” (Jaona 8:32) Inona no dikan’izany?
Manafaka anao dieny izao ny fahamarinana. Manafaka anao amin’ny fampianaran-diso sy ny lainga aelin’i Satana izy io. Manana fanantenana koa ianao, fa tsy toa an’ireo olona an-tapitrisany tsy mahalala an’i Jehovah. (Romanina 8:22) Afaka amin’ny “tahotra ny fahafatesana” mihitsy aza ireo naman’Andriamanitra.—Hebreo 2:14, 15.
Ho afaka amin’ny fijaliana rehetra ianao ao amin’ny tontolo vaovaon’Andriamanitra. Tena hahafinaritra ny fiainana amin’ny hoavy! Ho lasa Paradisa ny tany, ka tsy hisy ady sy aretina ary heloka bevava intsony. Tsy hahantra na ho noana intsony ny olona, ary tsy ho antitra na ho faty koa. Ho foana ny tahotra sy ny fampahoriana ary ny tsy rariny. Hoy ny Baiboly: ‘Manokatra ny tanany [Andriamanitra] ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra.’—Salamo 145:16.
Hiaina mandrakizay ireo naman’Andriamanitra. Homen’Andriamanitra fiainana mandrakizay ireo rehetra miezaka ny ho namany. Fanomezana sarobidy izany. (Romanina 6:23) Alao sary an-tsaina ny zavatra be dia be ho azonao atao amin’ny fiainana mandrakizay!
Hanam-potoana hanaovana zavatra maro be ianao. Angamba ianao te hianatra hitendry zavamaneno, na hanao hoso-doko, na handrafitra. Mety ho tianao ny handinika momba ny biby sy ny zavamaniry. Te hitety tany sy hamantatra olona isan-karazany koa angamba ianao. Ho azonao atao izany rehetra izany any amin’ny Paradisa!
Hahazo namana be dia be ianao. Hanam-potoana hifankahalalana amin’ireo naman’Andriamanitra maro be ianao, ao amin’ny tontolo vaovao. Ho fantatrao ny talentan’izy ireo sy ny toetra tsarany, ka ho lasa mpinamana ianareo. Ho tianao izy ireo, ary ianao koa ho tiany. (1 Korintianina 13:8) Azonao atao namana daholo ny olona eto an-tany amin’izay! Ny tena tsara anefa dia hoe ho lasa namana akaikin’i Jehovah ianao, arakaraka ny fandehan’ny fotoana. Enga anie ianao ka ho naman’Andriamanitra mandrakizay!
Mampirisika ny Kristianina ny Baiboly mba hiaraka amin’ireo mpiray finoana. Nahoana izany no hahasoa anao?